Waqtiga la shaacinayo shirkadaha soo saareya shidaalka Soomaaliya
Xaraashka saliida dalkan dhaca Geeska qaarada Afrika ayaa abuuray xiisad siyaasadeed oo culus.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in horaanta sanadka dambe ee 2021-ka ay shaacineyso shirkadaha ku guuleystay wareega koowaad ee ruqsadaha shidaal soo saaritaanka.
Todoba xirmo oo laga helay degaanada HirShabelle, Koonfur Galbeed, Jubaland iyo Galmudug ayaa laga soo saarayaa kheyraadkaas. Puntland oo qaadacdey hanaankan waxay uga digtay shirkadaha in ay iibsadaan.
Ibraahim Cali Xuseen, maareeyaha Hay'adda Batroolka Soomaaliya oo wareysigii ugu horeeyay siiyey wakaalada Reuters tan iyo markii la magacaabay asbuucii hore, ayaa xusay in shalay ay bilaabeen xaraashka saliidda.
"Hadi uusan jiri lahayn Coronavirus, waxaan isku raaci lahayn habka loo marayo, kadibna waxaan heli lahayn heshiiska dhamaadka sanadkan," ayuu yiri, isagoo u muuqda mid qiraya in ay qandaraaskaas u xayiran yihiin.
Wasaaradda Batroolka ayaa horey u xaqiijisay in daraasad la sameeyay lagu helay 15 xirmo shidaal, kuwaas oo ay ku jiraan 30 bilyan oo fuusto shidaal ah.
Inkasta oo shirkadda Exxon aysan wali ka jawaabin sheegashadda xukuumadda Muqdisho, afhayeen u hadlay Shell wuxuu tilmaamay in ay wadahadalo u socdaan, isagoo kalsooni ka muujiyey in ay noqdaan kuwa miradhala.
DF Soomaaliya oo heshiis cusub la gashay shirkado sahmiya shidaalka
Soomaliya 02.03.2020. 22:00
Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ayaa ku dhawaaqdey heshiiska, iyaddoo sharciga wali lagu muransan yahay.
Wasiirka difaaca & Taliyeyaasha Ciidanka oo hortagaya Guddiga difaaca
Soomaliya 27.09.2018. 10:38
Taliye loo eryay dilkii labada qof ee rayidka ahaa loogu geystay Muqdisho
Soomaliya 25.04.2020. 15:55
Dowladda Soomaaliya oo khasaareysa $1.5 bilyan Coronavirus dartiisa
Soomaliya 23.04.2020. 13:20